Gbasara Anyị - Molooco
Nabata na MOLOOCO. Found ka chọta ebe a kasị ukwuu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka ọtụtụ n'ime mkpa gị. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma nọrọ na-ege ntị na mgbasa ozi anyị maka nnukwu ego ohere. Anyị na-ebukọrọ ngwaahịa mgbe niile iji mee ka ndụ gị ka mma.
MOLOOCO dị afọ asatọ na ụlọ ọrụ ntanetị n'ịntanetị na-ejere ndị mmadụ ozi na ngwaahịa dị iche iche. MOLOOCO bụ ụlọ ọrụ nweere onwe ya kpamkpam yabụ iguzosi ike n'ihe anyị bụ naanị nke ndị ahịa anyị, anyị na-eme ike anyị niile iji jeere ndị ahịa anyị ozi zuru oke. Anyị kwenyere na ntụkwasị obi dị n'etiti anyị dị ezigbo mkpa.
Enwere ike ịkpọtụrụ MOLOOCO n'oge ọ bụla! Anyị hụrụ gị n'anya na ekele maka ịbụ akụkụ nke MOLOOCO!